စိတ်ကူးပျော်ရာ: ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် နုပျိုနေစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်( ၅ ) ချက်
ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် နုပျိုနေစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်( ၅ ) ချက်
အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ သူတို့အသက် ၆၀ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသက် ၃၀ပဲဖြစ်ြဖစ် လူတွေအမြင်မှာ နုပျိုတဲ့အသွင်ကိုတော့ လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လူတွေဟာ သဘာဝကျကျ မလှပနိုင်တော့သလို၊ အသားအရေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေကို ရင်ဆိုင်လာရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နဂို ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုမိုနုပျိုတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ရနိုင်ဖို့ အချက် (၇) ချက်ကိုသာ လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ဖော်ပြပေးရရင်တော့
ငယ်ရွယ်နုပျိုချင်သူတွေ အထူးလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အရာကတော့ ဗီတာမင်စီကို ပုံမှန်သောက်ပေးဖို့ပါ။ သူက အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်တာမို့ ဗီတာမင်စီ မသောက်ဖြစ်ရင်တောင် ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့ လိမ္မော်သီး၊ အာလူး၊ ကီဝီ၊ စတော်ဘယ်ရီသီးစတာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။
၂။ပရိုတင်းဓာတ် ပြည့်ဝနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးတာပါပဲ။
ပရိုတင်းဓာတ်ကလည်း အသားအရေအတွက် အလွန်ပဲ အဓိကကျပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်ပုံစံ၊ စနစ်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်မကြွယ် လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ ကြက်ရင်အုံသား၊ ငါးတွေ၊ ကြက်ဥ၊ အခွံမာသီးစတာတွေဟာ ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေပါပဲ။
၃။အသီးအရွက်သုတ်စားတဲ့အခါ ဆီကိုသာ အသုံးပြုပါ။
Mayo ဟာ အရသာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ သူဟာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင်း အသီးအရွက်သုတ်စားတဲ့အခါ ဆီကိုသာ အစားထိုး စားပါ။ ဆီကိုလည်း သံလွင်ဆီတို့၊ ရှာလကာရည်တိုနဲ့ ရောစပ် အစားထိုးကြည့်ပါ။ ဒါတွေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင်စီနဲ့ အီး တိုးပွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါ။
၄။အလှကုန်မှာ ပေါင်ဒါကို မသုံးပါနဲ့။
ပေါင်ဒါဟာ မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြာင်းတွေကို တစ်ခုချည်း ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ပေါင်ဒါဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်းတိုင်းကို အသေးစိတ် ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ပြနိုင်တာမို့ မျက်နှာပေါ်က တစ်ချို့ အရေးအကြောင်း၊ အနာအဆာတွေကို ဖုံးဖို့အတွက်တော့ ပေါင်ဒါကို မရွေးချယ်လိုက်ပါနဲ့။
မျက်နှာကို နေ့တိုင်းဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်းခြယ်သသလိုမျိုး၊ သင့်လက်ချောင်းတွေကိုလည်း မေ့မထားလိုက်ပါနဲ့။ လက်ချောင်းတွေကို နေ့တိုင်း သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လက်ချောင်းအလှအတွက် သီးသန့်အလှကုန်တွေ ၀ယ်သုံးပါ။ နောက်ထပ် အကြံပေးချင်တာက handcream ထက် sunscreen ကို နေ့တိုင်းသုံေးပးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/16/2015 09:58:00 AM
အန္တရာယ် များလွန်းတဲ့ အဆီကျဆေး သောက်သုံးပြီး သေဆုံး...
တောင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်ရန...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခြောက်ကပ်ဆိတ်သုဉ်းသော မြို့တော်ကြီး...
အသည်းကွဲနေတယ် ဆိုရင် ..ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါလား ???
ချစ်သူ တစ်ယောက်ရလျှင် သူငယ်ချင်းကောင်း ၁ ယောက် ဆုံ...
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝင်ငွေက သူတို့ ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးတေ...
အမေရိကန်တွင် Facebook Message ကနေ သူငယ်ချင်းကို ငေ...
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနဲ့ မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက...
နီပေါလ်၌ အင်အားပြင်းထန်သောငလျင် လှုပ်ခတ်
ရွှေတိဂုံစေတီပုံတံဆိပ် အသုံးပြုထားသော အရက်ပုလင်းမျာ...
မိနစ် ၁၀၀ ပဲ အသက်ရှင်ပြီး သူရဲကောင်းအဖြစ် ပြန်ထွက်...
လူအများစု မှားယွင်းစွာ မှတ်ထားလေ့ ရှိကြသောအရာများ
အမျိုးသားတွေ သဘောကျတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီး...
မရှိမဖြစ်ဆောင်ထား… သိထားရမည့် ဗဟုသုတများ
ဘဝအတွက် ကြိုးစားနေချိန် ရှောင်ရှားဖွယ်ရာများ
ကော်ဖီများများ သောက်ခြင်းက စိတ်ခြောက်ခြားစေ
ထိပ်ပြောင်တဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် ဆံပင်ပြန်ပေါက်နည်း...
ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် လိုအပ်ချက် (၈) ခ...
အချိန်ကုန် ငွေကုန် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်းလေးများ
ဆင်းရဲခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ တရားခံများ
တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲ စာလုပ်ခြင်းဟာ ထိရောက်မှုမရှိနိုင်
မူကြိုမှာ သူငယ်တန်းသင်တာ ကလေး ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု...
ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်မာ ပါကစ...
ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေသည့် နေ့စဉ်အလေ့အထများ
သွေးအမျိုးအစားက ဖော်ပြသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
သွားများ ကြံ့ခိုင်ပြီး ဖြူဖွေးစေရန် လမ်းညွှန်ချက်မျ...
တင်းတိပ်ဖြစ်ရသော အကြောင်းအရင်း ....
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နေပြီလ...
ခံစားလွယ်သူတို့ ဖြစ်တတ်သော အလေ့အထများ
လူငယ်တို့ရဲ့ ပညာရေး နဲ့ မိသားစုရဲ့ နွေးထွေးမှု
အဓမ္မ အပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးကို လှောင်အိမ်ထဲ ထည့်ပြီး...
ကြည့်မကောင်းတဲ့ အဆီပိုတွေကို အမြန်ဆုံး ကျဆင်းစေမည်...
အာရှတွင် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အနုပညာရှင်ဆု ရရှိခဲ့တ...
မကောင်းဝဲပြီး အကောင်းတွဲကာ ပြောင်းလဲလိုက်ကြပါစို့
"ဒေါက်တာစောမြအောင်ဖောင်ဒေးရှင်း မှ မေတ္တာဖြင့် တံတေ...
ဆေးစားစရာမလိုပဲ ဗိုက်ချပ် အဆီကျလိုလျှင် (အူဆေးနည်း...
ပျားရည်စစ်မစစ် စစ်နည်း ( ၁၀ )
အသုံးဝင်သော နှစ်လုံးတွဲ အင်္ဂလိပ်စကားတိုလေးများ
သင့်လက်ရှိအလုပ်ကနေပြောင်းဖို. သေချာစေတဲ့အချက် (၃)ခ...
ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွက်ဂုဏ်ယူထိုက်သည့် Apple ၏ လုပ်ရပ်
လက်လှမ်းမှီသမျှ ကမ္ဘာ့ပြက္ခဒိန်တို့ကို စီစစ်ချက်
သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိ မှဲ့ များမှ ပြောပြသော သင့်အကြောင...
အစာမကျေရင်ပူခြင်း နှင့် အိမ်တွင်းကုထုံး
ဂျပန်တွေဆီက နည်းနည်းလောက် သင်ယူလိုက်ရအောင်
သနပ်ခါးသင်္ကြန်နှင့် နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ရန်ကုန်သာဓုကန်သ...
ဒီနေ့ကစပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်...
အသည်းရောင် အသားဝါ B ဘီပိုး ရှိသူများ အတွက် အိမ်တွ...
အလွှာ ၃ ပါး
မော်လမြိုင်မြို့ ရိုးဂိုးကျေးရွာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့...
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အကြာကြီး စိတ်မကောက်လေနဲ့
အပူလေသင်တုန်း (Heat Stroke) မိရင် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်နည...
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် စွယ်တော်မြတ်စေတီရေကန်၌ ဇီဝိတ...
မန္တလေးသင်္ကြန်အတက်နေ့ နှင့်မြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်ပိတ်ပြွဲ...
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် သာဓုကန်ဘုရားအန...
အိမ်ခြေမဲ့များ အတွက် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ လမ်းထောင့်က ...
“နှစ်ဟောင်းကို နှုတ်ဆက်ရင်း ပါရမီဖြည့်မယ်”
ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် နုပျိုနေစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချ...
နေပြည်တော် ပေါင်းလောင်း သင်္ကြန်အတက်နေ့မြင်ကွင်း.
ရန်ကုန်မဟာသင်္ကြန် အတတ်နေ့ မြင်ကွင်များ.
အမျုိူးသားများသဘောကျသည့် (၁၀) ချက်
ပခုက္ကူမြို့ သင်္ကြန်အတက်နေ့ မြင်ကွင်း.
စိတ်ညစ်ရင် သတိရဖို့ ၁၄ ချက်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သံချပ်အဖွဲ့များ ဖျော်ဖြေမှုမြင်ကွင...
မန္တလေးမြို့ သင်္ကြန်အတက်နေ့ မြင်ကွင်း
သင်္ကြန်အတက်နေ့ အိုင်စီရှိုးနှင့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း...
ဦးချစ်မောင်လမ်းမပေါ်တွင် နေ့လည်စာ ဝေငှလှူဒါန်းနေသေ...
ရန်ကုန်မြို့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မြင်ကွင်းများ.
သင်္ကြန်အတက်နေ့ ညနေခင်း ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမြင်ကွင်းမျာ...
Polo Club ရေကစားမဏ္ဍပ်၏ ဖျော်ဖြေမှုမြင်ကွင်းများ